अध्याय Law१ कानूनको उपन्यास नि: शुल्क अनलाइनमा आश्चर्यजनक छोराको XperimentalHamid
कानून उपन्यास नि: शुल्क अनलाइनमा आश्चर्यजनक छोराको अध्याय १
जुन 19, 2021 by कासिम खान
पढ्नुहोस् अध्याय 3214 उपन्यासको कानून मा अद्भुत छोरा by भगवान पात नि: शुल्क अनलाइन।
अधिक अपडेटको लागि सदस्यता लिनुहोस्
25,092 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्
जब नूह र जेले यो सुने, बुबा र छोरा जोडी दुबै ओछ्यानमा पल्टिए र एक मिनेट भन्दा बढीको लागि स्थिर गरे।
जेलाई अझै केही अविश्वास थियो, उसले आफ्नो मुख खोल्यो र सोध्यो, "हजुरआमा तिमी मसँग ठट्टा गर्नु हुँदैन र मलाई हैरान पार्नु हुन्न, हैन?"
"मलाई आशा छ यो मजाक हो!" श्रीमती जिओले रिसाउँदै यसो भने, "थेरेसाका महान व्यक्ति उनी नै हुनेछन् भनेर मैले सपनामा सोचेको छैन, यदि मैले छनौट गर्न सक्थें भने म उनी भन्दा मरेको मान्छे छान्छु।"
जे शंकालु शंकाले भरिएको थियो: “तर ..... तर उसले थेरीसालाई किन मद्दत गर्ने? भन्नुपर्दा यो उचित छ कि ऊ हाम्रो विरुद्धमा द्वेषपूर्ण छ, र हामीलाई बर्बाद भएको देख्न सक्दैन, त्यसोभए उसले हामीलाई कसरी मदत गर्न सक्छ? ”
थेरीसाले भने: “भाइ, तपाईंले सज्जनको हृदय लिनु हुँदैन, जेठो भाइले हाम्रो अगाडि रिस उठ्यो।”
"तर यसको कारण हामी उहाँसँग र उनको परिवारसँग बारम्बार समस्याको खोजी गरिरहेका थियौं, तर दाजुभाइले कहिल्यै हामीमाथि गल्ती भेट्टाउन पहल गरेन!"
जे उदासिन भने: "उनीहरूलाई समस्या भेट्टाउन, तर किनभने तिनीहरू सधैं हाम्रो विरुद्दमा छन्, एवेला भन्ने बाहेक।"
"हजुरआमाले उनलाई लामो समयदेखि मार्भेनलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न आग्रह गरे तर उनले सुन्न अस्वीकार गरे र केही गुनासो भोग्नु पर्‍यो र जिओ ग्रुपलाई आफ्नो व्यवसाय स्थापना गर्न छोडिदिए।"
"उहाँ पु ानुरूप धमर्परायण हुनुहुन्न, उनी हजुरआमालाई उनीहरुको भिलामा सार्न सहमत भएनन्, उनीह राजी भएन। उनीहरू हजुरआमालाई जेलमा हालिदिए! ”
थेरीसाको स्वर कडा थियो किनभने उनले हप्काए, "तपाईं कसरी अझै आभास पाउनुभएको छैन? के तपाईंले महसुस गर्नुभएन कि हामी सबै गलत थिए। ”
“बहिनी अवेला मार्भनलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न राजी भएकी थिइनन्, हामी उनलाई कसले जबरजस्ती गर्थ्यौं? विवाहको स्वतन्त्रता, प्रेमको स्वतन्त्रता, राज्यले वर्षौंदेखि यसो भनेको छ, हामी किन उनको छनौटको आदर गर्न सक्दैनौं? "
"उनको आफ्नै व्यवसाय स्थापना गर्ने कुरा पनि छ, किन उनी पहिलो स्थानमा आफ्नै व्यवसाय स्थापना गर्न चाहन्छे, तपाईको हृदयमा अझै स्पष्ट विचार छैन?"
"उनले पहल गरिन् र एम्पायर ग्रुपबाट ठेक्का लिइन्, त्यसैले हजुरआमाले हजुरआमाले आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्दथ्यो र उनीलाई निर्देशकको स्थान दिनुपर्दथ्यो, तर तपाईले के गर्नुभयो? हजुरआमाको अगाडि तपाईंले उनको बारेमा नराम्रा कुरा गर्नुभयो। ”
“तपाईले उनलाई प्रेम सम्बन्ध भएकोमा बदनाम गर्नुभयो, र अन्तमा हजुरआमालाई निर्देशकको रुपमा मूर्ख बनाउनुभयो, कि एक्लो बहिनी अवेलाको मुटु तोड्यो।
जेको अनुहार रातो र कालो थियो, उनी केही खण्डन गर्न चाहन्थे, तर उनले अस्वीकार गर्ने कुनै कुरा भेट्टाएनन्, त्यसैले उनले भने,
"हामी यस कुरालाई बिर्सौं, मानौं तिनीहरू नयाँ विलामा बसाइँ सरेका छन्, of को परिवार यति ठूलो भिलामा बस्छन्, उनीहरूले हजुरआमालाई आशिष्‌ लिन आमन्त्रित गर्नु हुँदैन?"
"कुन आधारमा?" थेरेसाले भने,
"साँचो भन्नुपर्दा, हजुरआमाले परिवारसँग कहिल्यै राम्रो व्यवहार गर्नुभएन, उनीहरूलाई कुनै फाइदा पनि दिनुभएन, उनीहरूलाई कहिलेकाहीं अप्ठ्यारो हुनेछ, र घरबाट लात हान्ने पनि।"
“उनीहरूले उनलाई उनलाई आफ्नो भिलामा किन निम्त्याउने? यदि तपाईं उनीहरूको जुत्तामा हुनुहुन्छ भने, त्यसो गर्नुहुन्छ? ”
जे होस् श्रीमती जिओ उनको मुटुमा ज्यादै चिन्तित थिइन, तर उनी सोझै इन्कार गर्न सक्दिन, आखिर थेरेसा परिवारको आधारस्तम्भ थिइन, र उनी अहिले उनीसँगै पल्टिहिन्।
त्यसोभए उनी अहिले उनीसँग संघर्ष गर्ने हिम्मत भएकी थिइनन्, त्यसैले उनी केवल बृद्धि भएको झोला झैं पक्षमा बसेकी र केहि भनेकी थिइनन्।
जे थेरीसालाई खण्डन गर्न असमर्थ थिए, रातो अनुहारले भने: “त्यसो भए हाम्रो आमाको बदला सधैं बुझिन्छ, हैन? उसले हाम्रो आमालाई कालो कोइलाको भट्टामा पठायो, यो कुरा तिमीले उसलाई माफ गर्न सक्छौ?
थेरीसाले बयान गर्यो, "त्यसोभए तपाईं बताउनुहोस् किन मार्भेनले हाम्रो आमालाई कालो कोइलाको भट्टामा पठाइदिई?"
जे बोलेको थिएन।
वास्तवमा, उहाँ आफ्नो हृदयमा राम्ररी जान्नुहुन्थ्यो।
सुरुमा, यो कुरा अन्ततः हो किनकि आमा र बुबाले मार्भेनको परिवारप्रति नराम्रो मनसाय राख्नुभएको थियो, र उनीहरूले भियोलाको पासोमा फस्नका लागि अन्यसँग सेनामा सामेल भएका थिए, तर तिनीहरूले मार्भेनबाट क्र्याक हुने आशा गरेका थिएनन्।
त्यसोभए, अन्त्यमा, आमाको कुरा पनि दोष लागी मानिन्छ, कसरी आफ्नै मैदान धुने अर्थहीन छ।
यूट्यूबको सदस्यता लिनुहोस्
विभाग उपन्यास, रोमान्स ट्याग भगवान पात उपन्यास, कानून मा अद्भुत छोरा, लॉर्ड लीफ द्वारा कानूनमा आश्चर्यजनक छोरा, कानून उपन्यास मा कमाल छोरा, कानून PDF मा आश्चर्यजनक छोरा